Maalinta: Ogast 25, 2018
In Konya, shirkada software ah oo ka hawlgala oo duurka ku of technology joofane "AKINSOFT", shirkadda ugu horeysay Turkey ee robot saarta looba bilowday wax soo saarka. 2 kun oo 700 mitir laba jibaaran oo laba jibbaaran ayaa guud ahaan warshadii 11 kun oo mitir murabac ah la aasaasay [More ...]
Samsunspor, kulanka diyaarinta ee Orduspor-ka cusub ayaa si xamaasad leh u sugey intii uu sugayay Duqa Magaalada Caabudwaaq Zihni Sahin. Duqa Magaalada Samsun ee Cayaaraha ka hor ciyaarta diyaarinta ayaa la filayaa inay xiiso weyn u muujiso taageerayaasha [More ...]
50 Thousand Ships ayaa ka gudubtay Channel Channel
In kasta oo shaqooyinka Kanal Istanbul, oo sidoo kale lagu soo daray Qorshaha Waxqabadka ee 2011-ka maalmood ah ee uu ku dhawaaqay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sanadkii 100, wali waa socdaa, mas'uuliyiinta Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. [More ...]
Fatih Pistil wuxuu wadaagay macluumaadka ku saabsan shaqooyinka socda ee TOPÇA Multi-Storey Junction. Wajahadda baaxadda hagaajinta carrada, 12 [More ...]
Duqa magaalada Toçoğlu wuxuu eegay shaqooyinka socda ee Sunflower Valley iyo Baaskiilka. Nidaamkeenna dhiraynta ayaa dhammaaday. Dhismeheena kafateeriyada, barkadda qurxinta iyo garoonnada carruurta ayaa iyaguna dhammaaday. [More ...]
Wadada Channel Istanbul, ee lagu sharaxay 2011 oo loo yaqaan "mashruuc waalli ah oo aan bulshada ka jirin, ayaa shacabka weydiinaya. Halkaan waxaa ah wadada loo maro Channel Istanbul Ulaştırma Janaayo, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan [More ...]